आर्यघाटमा सपनाको संसार — Breaking News, Headlines & Multimedia
आर्यघाटमा सपनाको संसार
कोरपाटी संवाददातामंसिर १०, २०७७काठमाडौं
वि.सं २०७७ मङ्सिर १० बुधबार
विश्वका प्रभावशाली र प्रेरणादायी महिलाको सूचीमा फिनल्यान्डकी प्रधानमन्त्री साना मारिन र कोभिड–१९ विरुद्ध अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले बनाइरहेको भ्याक्सिनको रिसर्च टोलीकी अगुवा सराह गिल्बर्टसँगै नेपालकी सपना रोकामगर पनि परेकी छिन् । बेवारिसे शवलाई दागबत्ती दिने र जलाउने कर्ममा सक्रिय यी १८ वर्षीया किशोरीको सपना पनि सरल छ ।
नेपालकी सपना रोकामगर २०२० को विश्वकै प्रेरणादायी र प्रभावशाली महिलाहरूको सूचीमा परेकी छिन् । बिबिसीले तयार पारेको सूचीमा नेपालबाट उनी मात्रै परेकी हुन् । यस वर्ष बिबिसीले अप्ठ्यारो स्थितिबीच पनि समाजमा परिवर्तन ल्याउने खालका काम गर्ने एक सय महिलालाई सो सूचीमा समावेश गरेको छ ।
बिबिसीले तयार पारेको सूचीमा फिनल्यान्डकी प्रधानमन्त्री सान्या मरिनदेखि अवतार र मार्बल सिनेमाकी नायिका मिचेल एओ, कोरोना भाइरसविरुद्धको भ्याक्सिन पत्ता लगाउने अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको अनुसन्धान विभाग प्रमुख सारा गिल्बडए पनि छिन् । बिबिसीले प्रत्येक वर्ष विश्वको विभिन्न स्थानमा रहेको आफ्नो प्रसारण र तिनमा कार्यरत रिपोर्टरहरूको सहयोगको माध्यमले विश्वको प्रेरणादायी र प्रभावशाली एक सयजना महिलाको सूची तयार पार्ने गरेको छ । त्यही सूचीमा म्याग्दीकी १८ वर्षीया सपना पनि समेटिएकी हुन् । सपनाले आफू सय उत्कृष्ट महिलाभित्र पर्दा खुसी तथा गौरन्वावित भएको बिबिसीलाई बताएकी छिन् । उनी बेवारिसे शव व्यवस्थापनमा संलग्न छिन् ।
कुनै समय आफैँलाई सहयोग गर्ने कोही नभेट्दा सडकमा पुगेकी सपना त्यही अनुभवले समाज सेवामा लाग्न प्रेरित गरेको सुनाउँछिन् । ‘विश्वभरि नै घरबारविहीन र त्यागिएका मान्छेहरू छन् । सडकमै मृत्युवरण गर्ने व्यक्तिहरू पनि अन्तिम संस्कारका लागि लायक त हुन्छन् नै,’ बिबिसीले उनको भनाइ उद्धृत गर्दै लेखेको छ, ‘म यो काम सामाजिक सेवाका लागि गरिरहेको छैन, मेरो मनको शान्तिका लागि गरिरहेकी छु ।’
केही समय लागुऔषध दुव्र्यसनीमा परेकी सपना त्यसको लतबाट छुटकारा पाउन पुनस्र्थापन केन्द्रसमेत गइन् । त्यहाँबाट फर्केपछि उनी तीन महिना घरविहीन भइन् । घरविहीन अवस्थामै उनी काठमाडौं आइन् । जीवनमा केही गर्नुपर्छ भावनाका साथ बेवारिस भएको शव व्यवस्थापनमा लागिन् । ‘एक सामान्य महिलाका लागि यो प्रेरणा हो,’ सपनाले बिबिसीलाई भनेकी छिन् ।
कोभिड–१९ को महामारी समयमा पनि सपना पशुपति क्षेत्रमा निकै व्यस्त भइन् । कोभिडबाट मृत्यु भएको शव व्यवस्थापन गर्न र दाहसंस्कारमा उनको सक्रियता थियो । ३५ दिनसम्म कुनै पनि शवको जिम्मेवारी कसैले लिन नआएको अवस्थामा सपनाले अग्रसरता लिई त्यो शवको व्यवस्थापन गर्ने गरेकी छिन् । उनलाई विनयजंग बस्नेतले सहयोग गर्दै आएका छन् । दाहसंस्कार मात्र होइन, उनी किरिया पनि बस्छिन् । बेवारिसे लासमा दागबत्ती दिँदा धेरैपटक गाली खाएको उनी बताउँछिन् ।
यति धेरै जिउँदा मान्छे भएको सहरको कुनै कुनामा वर्षौँदेखि कुहिएर बसेका शव छन् : सपना रोकामगर
हाम्रो परिवार खेती–किसानीमै आधारित छ । धान, कोदो मकैको खेती गर्ने र त्यसैका आधारमा जीवन चलाउने परिवार हो । सामान्य परिवार नै भए पनि म घरको कान्छी छोरी भएकीले मलाई अभाव भन्ने महसुस कहिल्यै भएन । म राम्रो पढ्ने विद्यार्थी थिएँ । यस्तो अवस्थामा सबैले राम्रो पढी भनेर प्रशंसा गर्दै गए, त्यसलाई मैले नियन्त्रण गर्न सकिनँ । कतिपय विषयलाई इगोको रूपमा लिएँ, कतिपय विषयमा उत्ताउली पनि भएँ । म आफैँले आफैँलाई भन्दा म बिग्रेकी थिएँ । अझ, एसएलसी दिएपछि पारिवारिक हिसाबमा दूरी निर्माण भयो । खासमा कलेज पढ्नका लागि म बेनी आएपछि मेरो जीवन कुबाटोमै लागेको थियो । भिडमा रमाउँदारमाउँदै एक्लिएको पत्तै पाइनँ । त्यो समयमा राम्रो सोच्दासोच्दै पनि, अरूका लागि राम्रो गर्दागर्दै पनि म दलदलमा फसेँ छु । म त सडककै जीवन बिताउने भइसकेकी रहेछु । मेरा कमी–कमजोरी नभएको भए त प्रश्नै हुने थिएन । तर, मेरो आत्माले भन्थ्यो– मैले अरूको कुभलो के गरेकी छु र ? आफ्नो जीवनलाई मात्र त दुःख दिएकी हुँ । तर, त्यसले आमा, बुबा र परिवारलाई कति दुःखी बनाएको छ, समाजलाई कति हानि गरेको छ भन्ने सोच्न सकिनँ । त्यो वेलामा समाजले कस्तो व्यवहार गर्छ ? त्यो महत्वपूर्ण हुने रहेछ । घृणा गर्दा घृणा मनमा पलाउने रहेछ, त्यसले झन् गलत बाटोमा लग्ने रहेछ । मैले आमा, बुबा र आफन्तलाई धेरै दुःख दिएँ । समाजलाई पनि दुःख दिएँ । तर, त्यस्तो वेला पनि आमाबुबाले माया मार्नुभएन । मैले यति सताउँदा पनि बाबुआमाले साथ दिन सक्छन्, म फर्केर आउने प्रेरणा यही हो । मान्छेले मान्छेलाई प्रेम र विश्वास गर्छ भने त्योभन्दा ठूलो शक्ति र प्रभाव केही हुँदैन, म एक उदाहरण हुँ ।
खासमा सडकमै पुगेपछि मैले आफ्नो जिन्दगीसँग संघर्ष गरिरहेकी थिएँ । फर्कन पटकपटक कोसिस गरेकी थिएँ । तर, फेरि जिन्दगी सकियो, बाँचेर पनि कुनै सार छैन भन्ने टुंगोमा पनि पुगेँ । डोरी लिएर धेरैपटक आत्महत्याको कोसिस पनि गरेकी थिएँ । तर, आफैँले रोजेर स्विकार्ने मृत्यु त हार हो, जित्नु नै जीवन हो भन्ने भावना पनि मनमा आइरहन्थ्यो । मैले जिन्दगीलाई जिन्दगीको अर्थमा बाँच्न जानिनँ, जिन्दगीलाई जिन्दगीको तरिकाले जिउन जानिनँ, तर के भयो ? कोसिस गरिहेरुँ न, आफूलाई नै मौका दिऊँ भन्ने ठहर पनि भयो । त्यसका लागि परिवारबाट पाइने अलिकति माया र विश्वासको ठूलो अर्थ रहेछ । परिवारको साथ पाएपछि जिन्दगीलाई नयाँ तरिकाबाट जिउने कोसिस गर्छु भनेर अठोट लिएँ । म आफू त बाँच्छु, तर बाँच्ने आफ्ना लागि मात्र हो र ? यो प्रश्न पनि थियो । आफ्ना लागि त सबैजना बाँचिरहेका हुन्छन् । सानै उमेरमा पनि म आफ्ना लागि पर्याप्त बाँचेँ । अब समाजका लागि बाँच्छु भन्ने भावनाले अघि बढेकी छु, सबैको साथ र हौसला पाएकी छु । यो नै मेरो जीवनको सबैभन्दा ठूलो आधार हो ।
तपाईंले गर्नुभएको सामाजिक काम अतुलनीय छ, तर अध्ययनलाई पनि निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने सोच्नुभएको छ ?
भविष्यमा पनि राम्रो नाम होला भनेर यो काममा पाइला राखेको होइन । मैले त हिजो आफैँले भोगेको, महसुस गरेको जीवनलाई अब रचनात्मक बनाउनुपर्छ भनेर लागेकी हुँ । आफूले जे गर्दा खुसी हुने हो, त्यही नै गर्ने हो । लोभ र लालचले काम गर्ने होइन । जिन्दगीसँग हारेका मान्छेलाई हौसला दिने कुरा कति ठूलो रहेछ भन्ने ज्ञान यो सम्मानले दिएको छ ।
तपाईंले गर्नुभएको काम असाधारण हो, तर यसका लागि सबैले स्वाबासी दिन्छन् भन्ने पनि होइन । अप्ठ्यारो प्रतिक्रियालाई कसरी सामना गर्दै आउनुभएको छ ?
कसैेकसैले होच्याउँछन् नि । धेरैले निरुत्साहित गर्न पनि खोजे । तर, उनीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु । किनभने मान्छेको स्वभाव फरक हुन्छ भन्ने सिक्न पनि पाएँ नि मैले । हिजो सडकमा बस्दा पनि मलाई नराम्रो भन्ने, आज सडकमा भएका मान्छेलाई उसको अन्तिम अधिकार दिने काम गर्दा पनि हेय भावनाले हेर्ने । त्यसैले भिडले के भन्छ भन्ने विषयमा धेरै सोच्नुहुन्न भन्ने लाग्छ मलाई । अर्को विषय, कतिपय मान्छेले पत्याउँदैनन् पनि । हिजो नराम्रो प्रतिक्रिया दिनेले अहिले भने बल दिन्छन् । कतिपय त म्यासेज गरेर भन्नुहुन्छ, ‘मैले आत्महत्या गर्न डोरी लिएर बसेको थिएँ, तपाईंको भिडियो हेरेसँगै मैले आफूलाई परिवर्तन गरेँ ।’ त्यसले चाहिँ अत्यधिक सन्तोष दिन्छ । हिजो तेरो जिन्दगी सकियो भन्ने मान्छेहरू पनि थिए । तर, ती सबै कुरालाई चिरेर अगाडि बढिसकेकी छु । अब कसैले रोक्न सक्दैन ।
बिबिसीको ‘प्रभावशाली र प्रेरणादायी महिलाको सूची’मा परेका महिलाहरू
साना मारिन, प्रधानमन्त्री (फिनल्यान्ड)
फिनल्यान्डकी प्रधानमन्त्री साना मारिनले महिला मात्रै मन्त्री रहेको संयुक्त सरकारको नेतृत्व गरिरहेकी छिन् ।
सराह गिल्बर्ट (बेलायत)
कोभिड– १९ विरुद्ध बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले बनाइरहेको भ्याक्सिनको रिसर्च टोलीको नेतृत्व सराहले गरेकी छिन् । उनी पनि सूचीमा छिन् ।
माहिरा खान, अभिनेत्री (पाकिस्तान)
पाकिस्तानी टेलिभिजन र सिनेमाका माध्यमबाट महिलामाथि हुने हिंसा र जातीयताको विरोध गर्दै आएकी माहिरा संयुक्त राष्ट्रसंघको शरणार्थी सद्भाव दूत पनि हुन् ।
रिना अख्तर, पूर्वयौनकर्मी (बंगलादेश)
कोरोना महामारी सुरु भएदेखि ढाकाका चार सय यौनकर्मीलाई रिना र उनको समूहले दैनिक खाना खुवाउँदै आएको छ ।
विल्किस वानो (भारत)
भारत सरकारले नागरिकतासम्बन्धी कानुन जारी गर्दा ८२ वर्षकी विल्किस वानोले सडकमा चर्को स्वरमा विरोध जनाइन् । साहिन बाघमा उनको अनुहार कसैले पनि भुलेका छैनन् । भारतीय पत्रकारले विल्किसलाई सिमान्तकृत आवाजकी महिला भन्ने गरेका छन् ।
सामया फरुकी (अफगानिस्तान)
अफगानिस्तानको हेरात प्रान्तमा पहिलो कोभिड– १९ को केस आउँदा सामया नेतृत्वको टोलीले थोरै खर्चमा उपचार गरेको थियो । उनीहरूले सस्तोमै भेन्टिलेटरबाट उपचार गर्न सकिने प्रस्ताव सरकारसमक्ष राखेका थिए ।
क्लाउडिया लोपेज (कोलम्बिया)
कोलम्बियाको बोगोटा सहरकै पहिलो महिला मेयर हुन् क्लाउडिया । ग्रिन पार्टीकी मेयर हुँदा उनले ११.६ मिलियन मत पाएकी थिइन् । यो कोलम्बियाको इतिहासमै एक उम्मेदवारले प्राप्त गरेको सबैभन्दा धेरै मत हो ।
इथेल्रेडा नाकिमुली म्पुन्गु (युगान्डा)
डा. एथेल्रेडा युगान्डाको माकेरेरे विश्वविद्यालयमा कार्यरत छिन् । उनी मेन्टल हेल्थसम्बन्धी एक्सपर्ट हुन् ।
सिन्डी बिसोप (थाइल्यान्ड)
मोडल तथा टेलिभिजन होस्ट सिन्डी युएन महिलाअन्तर्गत एसिया प्यासिफिक क्षेत्रकी सद्भाव दूत पनि हुन् । महिलाविरुद्धको हिंसा अन्त्यको कार्यक्रममा उनी अगाडि छिन् ।
नाओमी डिक्सन (बेलायत)
बेलायतकी नाओमीले आफ्नो जीवन नै यहुदी महिला तथा उनीहरूका बालबच्चाविरुद्ध हुने अन्यायविरुद्ध खर्चिएकी छिन् । यहुदी महिला शिक्षित हुनुपर्ने भन्दै उनले अभियानमा चलाइरहेकी छिन् ।
अमेरिकी कलाकार तथा वातावरणसम्बन्धी अभियन्ता जोन फोन्डादेखि इथियोपियाकी महिला फुटबल खेलाडी लोजा अबेरा जिइनोर र मोरोक्कोकी ¥यापर होउदा अबोइज पनि सूचीमा समेटिएका छन् । अबोइजले आफ्नो क्षेत्रबाट महिला अधिकार र समानताको पक्षमा वकालत गरेकी छिन् ।
त्यस्तै, बेलायतकी नर्स एलिजाबेथ एनिवन्वु, जर्मनीकी इन्जिनियर इरिका बेकर, अर्जेन्टिनाकी फुटबल प्रशिक्षक इभेलिना क्याब्रेरा पनि सूचीमा छन् । २७ वर्षकै उमेरमा अर्जेन्टिनामा महिला फुटबल संघ स्थापना गरेकी इभेलिनाले दृष्टिविहीन र जेलमा रहेका महिलालाई समेत फुटबल सिकाएकी थिइन् । विश्वको सय महिलाको सूचीमा अमेरिकाकी वैज्ञानिक लउरेन गार्डनर, चिनियाँ लेखिका फाङ फाङ, तान्जानियाकी कानुन व्यवसायी रेबेक्का ग्युमी पनि समेटिएका छन् । त्यस्तै, अशक्तहरूको पक्षमा काम गर्दै आइरहेका अमेरिकी एलिस वोङ र बेलायतकी सानी धन्दा पनि सूचीमा छिन् ।
२०१० मा ओस्कार अवार्ड जितेको फिल्म ‘अवतार’की कलाकार मलेसियाकी मिचेली इयोन पनि सूचीमा छिन् । प्रेरणादायी महिलाको सूचीमा नौ वर्षीया भारतीय बालिका रिदिमा पाण्डे पनि परेकी छिन् । उनी वातावरण अभियन्ता हुन् । भावी पुस्ताका लागि वातावरण बचाउनुपर्ने भन्दै अभियान चलाउँदै आएकी रिदिमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी भएर विद्यार्थीको उत्प्रेरक पनि बनेकी छिन् ।